Milina fantsom-boaloboka & Sodina
Haingam-pandeha haingam-pandeha Wall Pannel Roll Forming Machine
Milina Embossing Sheet Metal
Masinina mikiraoka mikodiadia mangatsiaka
VAOVAO FANDRAISANA –ISORAN'NY FANAMPOANA NY TARATRA OTOMATIKA
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-06-02
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD, miaraka amin'ny marika famantarana CORENTRANS®, ho mpamatsy matihanina amin'ny fitaovana fanodinana vy sy vahaolana voarindra. Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2010, CORENTRANS® dia nanolo-tena hanome milina metaly avo lenta sy vahaolana tafiditra. ● Asa ...
Ny vidin'ny vy any Shina dia miakatra amin'ny vidin'ny akora fototra
Manamboatra vy vy efa ho 100 no nanitsy ny vidiny tamin'ny alatsinainy teo teo am-pelatanan'ny vidin'ny akora toy ny vy. Niakatra ny vidin'ny vy hatramin'ny volana feb. Niakatra 6,3 isan-jato ny vidiny tamin'ny volana aprily taorian'ny fisondrotana 6,9 isan-jato tamin'ny volana martsa ary 7,6 isan-jato tamin'ny volana lasa teo, accor ...
FANAMBARANA NY Fisondrotana amin'ny karatra fandefasana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-05-12
Maersk dia naminavina fa ny fepetra toy ny tavoahangy fitehirizana sy ny tsy fahampian'ny kaontenera noho ny fangatahana miakatra dia hitohy hatramin'ny telovolana faha-2021 alohan'ny hiverenana amin'ny ara-dalàna; Evergreen General General Manager Xie Huiquan dia nilaza koa teo aloha fa ny fitohanana dia antenaina ...
Inona no atao hoe Slitting Line
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-04-29
Slitting Line, antsoina hoe milina fanorahana na tsipika fanetezana lavareny, dia ampiasaina amin'ny famolahana, fametahana, fampidirana ireo horonan-taratasy ho lasa vy lehibe fitakiana. Azo ampiharina amin'ny fikirakirana ny coil vy mangatsiaka na mafana, coil vy Silicon, coil tinplate, stainless steel a ...
VAOVAO INSPECTION - ANGLES EQUAL / U-CHANNEL PURLIN MILL
Satria tsy mbola misokatra izao ny dia iraisam-pirenena, dia hijery ny entana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fikarohana maso ivoho mpanara-maso antoko fahatelo. Ary raha ny tatitra fanaraha-maso natolotry ny maso ivoho hanao sonia ny tatitra fanaraha-maso, mandamina ...
Inona no milina fanaovana sary
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-04-27
Ny milina fanaovana sary tariby dia mampiasa ny plastika vy amin'ny tariby vy, manintona ny tariby vy amin'ny capstan na kôleana amin'ny kodiarana miaraka amin'ny rafitry ny maotera sy ny rafitra fandefasana, miaraka amin'ny fanampian'ny lubricant fanaovana sary sy ny sary mamoaka deformation plastika hahazoana ny diamete takiana. ..
NEWS SHIPPING - TM76
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-04-16
Mpamatsy matihanina amin'ny fitaovana fanodinana vy. Ampio ny mpanjifa hampitombo ny tombony ary hamaha haingana ny olan'ny famokarana ao an-toerana. Nalefanay tany Nizeria, Torkia, Iràka, ary Rosiana ny tadin'ny fantsom-boaloboka nandritra ny taona maro. Miakatra ny vidin'ny vy manerantany, ary miakatra ny vokatra farany ...
tamin'ny admin tamin'ny 2020-12-16
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD. dia mijanona ao amin'ny ROOM A309, NO.7178, ZHONG CHUN ROAD, DISTRICT MIN HANG, SHANGHAI, CHINA. Tamin'ny fiandohan'ny nananganana azy dia nanangana orinasa ampitan-dranomasina mifandraika amin'izany any Hong Kong ny orinasa. Manome fitaovana sy kojakoja masinina, fitaovana elektrika ...
Fitaovana fantsom-pandrefesana avo lenta matetika dia misy uncoiler, milina mahitsy, masinina manara-penitra, welder volo, fitehirizana tanany mivantana, milina fandrefesana, tsofa fandefasana solosaina, milina lohan-doha, milina fitiliana hydraulic, roller roller, fitaovana fitadiavana kilema, baler , hi ...
Indraindray maharitra ny fitaovana fantsom-by vita amin'ny fantsona ary mila indostria toy izany ny firenena sy ny vahoaka! Amin'ny dingan'ny fampandrosoana nasionaly dia mitombo ny fangatahana vy, ka ny haben'ny fantsom-by amin'ny famokarana vy dia mihalehibe hatrany. Afaka mamokatra ...
Ny milina fanaovana fantsom-by dia ampiasaina matetika amin'ny fizotran'ny fantsom-by vy sy karbaona vy toy ny fantsom-pifandraisana, toradroa, misy profil, ary fantsona mitambatra, izay novokarina tamin'ny alàlan'ny fanodinana, fananganana, fantsom-panafody, famonoana lasitra .. .
Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostria, ny fampiharana ny milina fanaovana fantsom-by tsy manara-penitra dia mihabetsaka hatrany, na ny fikojakojana ny fitaovana tsirairay amin'ny toerany, dia misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny famokarana, ary koa ny ain'ny serivisy amin'ny fitaovana. Mandehana ...
Niakatra ny vidin-tsolika China amin'ny recor ...
VAOVAO INSPECTION - ANGLES EQUAL / U-CHANNEL ...